JWZ-BMHG30DN-C Machine mitsivalana mitsoka - China JWZ-BMHG30DN-C mpamatsy milina mitsivalana, orinasa –Jwell
Fampisehoana sy tombony
Mety amin'ny famokarana 15-30L samy hafa habe Jerrycan fonosana simika.
Raiso ny loha maty tsy tapaka, ny firafitra miakatra, mety amin'ny famolavolana auto-line amin'ny tsipika, fandefasana tsipika amin'ny tsipika, fitsapana ny famoahana vokatra vita amin'ny tsipika, fampitana, fanangonana sns., Mampihena ny vidin'ny asa ary mampitombo ny tahan'ny famokarana.
Manangana firafitry ny platen karazana toggle, manana tombony amin'ny fanamiana fanamiana, hery fametahana lehibe, famolavolana bobongolo lehibe, fidinana mora kokoa & fanangonana ny bobongolo.
Rafitra co-extrusion roa sosona azo alaina.
Rafitra tsipika azo zahana safidy.
Rafitra fanaraha-maso servo hydraulic.
Volan'ny vokatra Max
连续 式 Karazana mitohy
Fahafahana manao plastika Max (PE)
kilao / h
Herin'ny motera paompy
Toerana eo anelanelan'ny platen
Platen habe W * H
Tapatapaka mihetsiketsika mihombo
Herin'ny fanafanana ny loha maty
Refy ankapobeny L * W * H
* * 5.6 4.8 4.5
Screw sy barika ho an'ny extruder
Tsipika fanamafisam-peon'ny rano